Tag: jadwal dabacsan | Martech Zone
Tag: jadwalka rogrogmi kara
Bilowga cudurka, shirkado badan ayaa jaray miisaaniyadooda xayeysiinta iyo suuqgeynta sababo la xiriira hoos u dhaca dakhliga. Ganacsiyada qaarkood waxay u maleeyeen in shaqo ka joojinta badan awgeed, macaamiisha ay joojin doonaan qarashka sidaas darteed miisaaniyadda xayeysiinta iyo suuqgeynta ayaa la dhimay. Shirkadahani waxay hoos u foorarsadeen iyagoo ka jawaabaya dhibaato dhaqaale. Marka lagu daro shirkadaha ka labalabeeya inay sii wadaan ama bilaabaan ololeyaal xayaysiis cusub, telefishanka iyo idaacadaha ayaa sidoo kale la halgamayay inay keensadaan oo ay sii haystaan ​​macaamiisha. Wakaaladaha iyo suuqgeynta